बजार | Samaj Khabar
काठमाडौं । नेपाल टेलिकमले उपलब्ध गराएका विभिन्न डाटा प्याकेज अब अनलाइनबाट खरिद गर्न सकिने भएको छ । टेलिकमले वि... करोड लगानीमा खुल्यो सर्कल लाउन्ज तथा गजल रेष्टुरेन्ट
काठमाडौं, ८ साउन । राजधानीको ठमेल नजिकै लेखनाथ मार्गमा सुविधा सम्पन्न लाउन्ज तथा गजल रेष्टुरेन्ट सञ्चालनमा आएक... साल्ट ट्रेडिङले शेयरधनीलाई २० प्रतिशत बोनस शेयर प्रदान गर्ने
काठमाडौं । साल्ट ट्रेडिङ कर्पाेरेशनले आफ्ना शेयरधनीलाई २० प्रतिशत बोनस शेयर र पाँच प्रतिशत नगद लाभांश दिने भएक... सेयर बजार :भ्याट विवाद लम्बिने सङ्केत
रमेश लम्साल , काठमाडौं । धितोपत्र दलाल व्यवसायी सङ्घलाई सेयर कारोबार गरेबापत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लगाउने... इटालीको पेन्टस् नेपालमा पनि
काठमाडौं । विजेता इन्टरनेसनल पेन्टिङ एण्ड डेकोरेटिभ प्रालिले इटालियन पेन्टस् सनमार्को नेपाली बजारमा पहिलोपटक भ... नेप्सेमा बुधबार के भयो ? कसले कमाए – कसले गुमाए ?
काठमाडौं । साताको चौंथौ कारोवार दिन बुुधबार नेप्से घटेपनि कारोवार रकम भने उच्चरुपमा बढेको छ । आज नेप्से छ दसमल... नेपाल बंगलादेश बैंकको ८० प्रतिशत हकप्रदको बिक्री बैसाख ७ गतेदेखि खुल्ने
नेपाल बंगलादेश बैंक(NBB)ले चैत्र १६ गतेसम्म कायम सेयरधनीहरुले खरिद गर्न पाउने ८० प्रतिशत हकप्रद सेयरको बिक्री... टेलिकमको डाटा प्याकेज अब अनलाइनबाटै
on: काठमाडौं । नेपाल टेलिकमले उपलब्ध गराएका विभिन्न डाटा प्याकेज अब अनलाइनबाट खरिद गर्न सकिने भएको छ । टेलिकमले विभिन्न डाटा प्याकेज आफ्नो वेबसाइटबाटै खरिद गर्न सकिने व्यवस्था गरेको हो । डाटा खर...	Read more Share
करोड लगानीमा खुल्यो सर्कल लाउन्ज तथा गजल रेष्टुरेन्ट
on: काठमाडौं, ८ साउन । राजधानीको ठमेल नजिकै लेखनाथ मार्गमा सुविधा सम्पन्न लाउन्ज तथा गजल रेष्टुरेन्ट सञ्चालनमा आएको छ । दुई युवा व्यवसायी आयुष ठकुरी (अमित) र लक्ष्मण खड्काले करिब एक करोडको लगानी...	Read more Share
साल्ट ट्रेडिङले शेयरधनीलाई २० प्रतिशत बोनस शेयर प्रदान गर्ने
on: काठमाडौं । साल्ट ट्रेडिङ कर्पाेरेशनले आफ्ना शेयरधनीलाई २० प्रतिशत बोनस शेयर र पाँच प्रतिशत नगद लाभांश दिने भएको छ। कर्पाेरेशनले आर्थिक वर्ष २०७२-७३ मा रु ६१ करोड २४ लाख मुनाफा आर्जन गरेको थि...	Read more Share
on: रमेश लम्साल , काठमाडौं । धितोपत्र दलाल व्यवसायी सङ्घलाई सेयर कारोबार गरेबापत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लगाउने कि नलगाउने भन्ने विवाद लामो समयसम्म कायम रहने देखिएको छ । सङ्घले आफू कर तिर्न त...	Read more Share
इटालीको पेन्टस् नेपालमा पनि
on: काठमाडौं । विजेता इन्टरनेसनल पेन्टिङ एण्ड डेकोरेटिभ प्रालिले इटालियन पेन्टस् सनमार्को नेपाली बजारमा पहिलोपटक भित्रयाएको छ । काठमाडौँस्थित विजेता प्रालिमा आज आयोजित कार्यक्रममा उक्त पेन्टसलाई...	Read more Share
नेप्सेमा बुधबार के भयो ? कसले कमाए – कसले गुमाए ?
on: काठमाडौं । साताको चौंथौ कारोवार दिन बुुधबार नेप्से घटेपनि कारोवार रकम भने उच्चरुपमा बढेको छ । आज नेप्से छ दसमलव ७५ अंकले घटेर १७ सय तीन दसमलव सात अंकमा कायम रहेको छ । नेप्से सेन्सिटिभ पनि एक...	Read more Share
नेपाल बंगलादेश बैंकको ८० प्रतिशत हकप्रदको बिक्री बैसाख ७ गतेदेखि खुल्ने
on: नेपाल बंगलादेश बैंक(NBB)ले चैत्र १६ गतेसम्म कायम सेयरधनीहरुले खरिद गर्न पाउने ८० प्रतिशत हकप्रद सेयरको बिक्री बैसाख ७ गतेदेखि गर्ने भएको छ । बैंकले चुक्ता पूँजी आठ अर्ब पुर्याउन तीन करोड २०...	Read more Share
अपी पावरले २ दुई गुणा बढी हकप्रद सेयर दिने
on: काठमाडौं । अपी पावर कम्पनीले सेयरधनीलाई एक बराबर दुई कित्ता हकप्रद सेयर दिने भएको छ । कम्पनीको यहाँ आज सम्पन्न विशेष साधारणसभाबाट सो प्रस्ताव पारित गरिएको हो । साधारणसभाबाट पारित प्रस्ताव ने...	Read more Share
निःशुल्क सीम बाँड्दै टेलिकम
on: बागलुङ । नेपाल टेलिकम बागलुङले आफ्ना ग्राहकलाई निःशुल्क रुपमा सीमकार्ड वितरण गरेको छ । यहाँ जारी चैत्राष्टमी मेलामा ‘स्टल’ नै राखेर टेलिकमले प्रिप्रेड मोबाइलको सीमकार्ड बाँडेको हो । दुई दिनम...	Read more Share
आधा घन्टामै ३ प्रतिशतले बढेपछि नेप्सेमा सर्किट ब्रेक लाग्यो
on: काठमाडौं । नेपाल स्टक एक्सचेञ्जमा बजार खुलेको २५ मिनेटमै ३ प्रतिशतले बढेपछि १५ मिनेटका लागि कारोबार बन्द (सर्किट ब्रेक) गरिएको छ । बिहान ११ बजे खुलेको नेप्से साढे ११ बजे ५० अंकको हाराहारीमा...	Read more Share